जीवन रहस्य हो, समस्या होईन - JagaranPost
Home/व्यक्ति बिशेष/जीवन रहस्य हो, समस्या होईन
स्वामी विवेकानन्द : के असफलता सही बाटोमा हिँड्नुभन्दा पनि पीडादायी हुन्छ ?
रामकृष्ण परमहंस : सफलता त्यो मानक हो जो अरू मानिसले निर्धारण गर्छन्, सन्तुष्टिको मानक तिमी आफैंंले निर्धारण गर्छौ । सन्तुष्ट हुनलाई अरूको मत चाहिंदैन ।
स्वामी विवेकानन्द : मैले आप\_mनो जीवनको सर्वोत्तम कसरी प्राप्त गर्न सक्छु ?
रामकृष्ण परमहंस : बिनाकुनै पश्चात्ताप आप\_mनो अतीतको सामना गर । पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आप\_mनो वर्तमानलाई सम्हाल । र, निडर भएर आप\_mनो भविष्यको तयारी गर ।
रामकृष्ण परमहंस : कुनै प्रार्थना बेकार जाँदैन । आप\_mनो आस्था जोगाइराख र डरलाई नजिक आउन नदेऊ । जीवन एउटा रहस्य हो, जसको तिमीले खोज गर्नु छ, जीवन कुनै समस्या होइन, जसलाई हल गर्नुपरोस् । मेरो विश्वास गर- यदि तिमीले बाँच्ने कसरी हो भन्ने थाहा पायौ भने जीवन साँच्चिकै आश्चर्यजनक छ ।
मिखाइल गोर्बचोबको ‘एन्टी-अल्कोहल क्याम्पेन’